Elu àgwà ahaziri 18650-4s 14.8v 3400mAh rechargeable Polymer Lithium Battery mkpọ maka Fusion Splicer
Anyị na-enye ezigbo mma ahaziri 18650-4s 14.8v 3400mAh Rechargeable Polymer Lithium Batrị maka Fusion Splicer.The batrị mkpọ nwere ike iji Fusion Splicer, Mobile printer, Mobile Scanner, ìhè anyanwụ, Nyochaa na ngwa ndị ọzọ kwesịrị ekwesị.81 * 73 * 18 mm akụkụ nke Samsung 18650-35E 3500mah batrị batrị dị elu nke nwere ezigbo ikike.Podọ nchedo wuru n'ime ka batrị ahụ dịkwuo ogologo ndụ na nchekwa.Since ogo dị elu n'onwe ya, anyị nwere obi ike ijere gị ozi site na mba ọ bụla. Anyị bụ onye nrụpụta kachasị ọhụrụ na Shenzhen kemgbe ọtụtụ afọ, anyị nwere ike ịhazi onwe gị maka ya ma ọ bụrụ na ụlọ ahịa anyị enweghị batrị ịchọrọ, nwee obi iru ala ịkpọtụrụ anyị site na email sales@polymer-batterys.com
Factory 18V 2.0Ah Li-ion Nnọchi Electric malite ịgba Batrị
Anyị na-ewepụta ọkụ eletrik 18V 2.0Ah Li-ion Na-anọchi anya batrị eletriki elekere eletriki elekere elekere elekere elekere elekere eletriki elekere elekere elekere eletriki elekere elekere elekere elekere elekere elekere elekere na elekere elekere eletrik. wireless dakpuo, Nnọchi malite ịgba batrị na ndị ọzọ kwesịrị ekwesị ngwa.PLM magburu onwe oru otu, na-eche dozie gị questions.We ntị ka gị chọrọ na mmepụta ụzọ time.Professional nwere ike ikwu maka you.Good ọnụ na e dere English, jide n'aka were were were ezigbo nkwurịta okwu. ase ga-aza na 24hours.
CPAP smart batrị nwere ngosipụta ike na-ewuli batrị Lithium 7.2V 13.6Ah na-agbanye ọkụ
Anyị na-enye CPAP smart batị na ikike ngosipụta ike na batrị Lithium batrị 7.2V 13.6Ah. Enwere ike iji batrị CPAP, igwe na-eku ume, batrị ， batrị ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ dabara adaba.Shall akụkụ nwere ikike dị elu.Smart BMS wuru n'ime, Nkwukọrịta I2C, batrị nwere ngosipụta ike.Made nke Samsung 18650 batrị batrị ogologo okirikiri ndụ.Battery nwere ike ịnabata ROHS, UL, CE, CB, UN38.3, MSDS, IEC62133, KC akwụkwọ dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.PLM bụ ọkachamara ọkachamara maka batrị lithium na-akwụ ụgwọ na ọtụtụ afọ experience.We anabata OEM / ODM iji si niile oversea countries.Our tumadi ahịa si Europe, Asia, Korea, America, Japan, Canada wdg Biko chere free ịkpọtụrụ anyị mgbe ị kwesịrị na batrị.
Factory price Mankeumman mma 22.2v 900mah analysis ngwaọrụ X-ray batrị mkpọ
Anyị na-enye Factory price UL mma 22.2v 900mah nyocha ngwaọrụ X-ray batrị pack.The batrị mkpọ nwere ike iji X-ray, Ikuku malite ịgba, Analysis ngwaọrụ, ịhịa aka n'ahụ egbe ma ọ bụ ndị ọzọ kwesịrị ekwesị ngwa. Obere akụkụ na elu ezigbo ikike. n'ime ka ịchekwa batrị ogologo ndụ na nchekwa.Besides, UL, CB, IEC62133 batrị masịrị, PSE, KC, UN38.3, MSDS, akwụkwọ RCM dị ka ihe ndị ahịa chọrọ. Anyị na-ewepụta batrị lithium batrị, karịsịa mkpọ dị nro na ike dị elu na nchekwa mkpụrụ ndụ, curved batrị na Ukwu, nakwa dị ka matured isi batrị, dị ka Lithium thionyl chloride, Lithium Manganese. Anyị na-ahaziri batrị mkpọ, nchekwa batrị.Our tumadi ahịa si Europe, Asia, Korea, America, Japan, Canada wdg Biko chere free ịkpọtụrụ anyị mgbe ị kwesịrị na batrị.
ICR18650 1S10P 3.7V 26Ah mkpọ batrị ejiri mee na robot -40 obere okpomọkụ
Anyị na-enye nnukwu mma ICR18650 1S10P 3.7V 26Ah batrị batrị eji na nnapụta robot -40 obere okpomọkụ ejiri maka Igwe ọkụ dị ala, Igwe eji agbapụta, ngwaahịa ndị dị ala, Ọpụpụ ngwaahịa na ngwa ndị ọzọ kwesịrị ekwesị. 1222 * 60 * 92mm akụkụ nke A ọkwa Elekere China nke kachasị mma 18650 mkpụrụ ndụ batrị 18650 dị elu na ezigbo ikike, na-ekwe nkwa ịghara iji batrị dị ala. ụlọ ọrụPLPL elebara anya na batrị lithium na ọrụ chaja ihe karịrị afọ 6.PLM Lithium batrị na chaja agafeela ọtụtụ nnwale mba ụwa, dị ka UL , OA, RoHs, UN38.3, MSDS, FCC, etc.PLM ụlọ ọrụ rụkọtara ọnụ na ndị na - ekesa nnukwu ego n'ọtụtụ mba, dịka USA, CA, UK, France, Italy na ndị ọzọ.OEM. Ọrụ ODM dị. Mmadụ Bịa kpọtụrụ anyị ọ bụla! HK nkwakọba mbubata batrị si Japan na Korea ozugbo. Ọnụahịa kacha mma na nkwa 100% batrị mbụ.
OEM 18650 10S5P 36V 25ah ngwungwu batrị Li-ion nke onye nwere ocha nhicha nwere odi elu
Anyị na-enye akwa batrị OEM 18650 10S5P 36V 25ah Li-ion ngwongwo maka ndị dị ọcha maka nwere ọmarịcha maka smart Cleaner, robot Cleaner, Ngwá ọrụ eletrik, ụgbọ ala eletrik, ngwaọrụ ndị nwere ike iwere, obere robot, ike ọkọnọ, nyocha Ahụike, Ventilator, ngwaahịa dị n'ọnụ ụzọ. na ngwa ndị ọzọ dabara adaba 352 * 140 * 68 mm nke emere nke ogo Ahu Chinese kachasị 10 ika 18650 sel batrị dị oke mma na ezigbo ikike, kwe ya nkwa na ị gaghị eji batrị dị ala.The ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ na-ahụ maka njikwa mma, usoro ule zuru oke na zuru oke, usoro, usoro ọrụ sayensị na-aga. Site na batrị batrị na-abata, mmepụta, mbupu, ọrụ na njikọ ndị ọzọ na-ejikwa njikwa, na-eso ISO9001: 2000. Ezigbo okwu na ederede Bekee, gbaa mbọ hụ na mkparịta ụka ọfụma ga-aza.
Li-ion 11.1V 3500mah 3S Lithium Polymer Battery Pack maka Inkjet ngwa nbipute, Ikanam Oriọna, isi ìhè wdg
Anyị na-enye ezigbo mma Li-ion 11.1V 3500mah 3S Lithium Polymer Battery Pack maka inkjet ngwa nbipute, mobile na ngwa nbipute, Ikanam Oriọna, isi ìhè, Mobile ngwaahịa, Portable ngwaọrụ, obere robot, ọkọnọ ike, Medical ileba anya, Ventilator, Ọ n'ọnụ ụzọ ngwaahịa na ndị ọzọ ngwa kwesiri ekwesi.72 * 40 * 40mm nke mebere ogo Akara ndi China isi 10 kacha mma 18650 sel batrị di elu na ezigbo ikike, kwe ha nkwa na i gaghi eji batri di ala.PLM ndi otu okacha amara, na-eche maka dozie ajuju gi. gị chọrọ na mmepụta ụzọ time.Professional nwere ike ikwu maka you.Good onu na e dere English, jide n'aka na were were were na-ekwurịta okwu.
Anyị na-enye obere elekere 12v 10ah / 24v 15ah miniah nwere obere ọkụ eletrik maka CPAP / Ventilator / Monitor.A nwere ike iji batrị elekere eletriki eletriki, okpu igwe ọkụ, ngwaahịa ekwentị, ngwaọrụ ndị nwere ike iwere, obere robot, ike ọkọnọ, nyocha Ahụike, Ventilator, Out ụzọ ngwaahịa na ndị ọzọ kwesịrị ekwesị ngwa. 488 110 * 217mm akụkụ mere nke A ọkwa Chinese top 10 ika 18650 batrị sel elu mma na ezigbo ikike.PLM ezigbo ndị ọrụ aka ọrụ, na-eche dozie ajụjụ gị.
Anyị na-elebara anya n'ihe ndị ị chọrọ na oge mmepụta.
Ọkachamara nwere ike ikwu maka gị. Ezigbo okwu na ederede Bekee, gbaa mbọ hụ nkwukọrịta okwu ọ bụla.
DD19A 14.8V 4000mAh 59.2Wh Electronic Packer Batrị na elu mma
Anyị na-enye DD19A 14.8V 4000mAh 59.2Wh Elekere batrị elekere elekere elekere elekere elekere eletrik .Ma enwere ike iji batrị eletriki elekere eletriki, okpu igwe eletriki, ngwa mkpanaaka igwe, ngwa mkpanaaka, obere robot na ngwa ndi ozo kwesiri ekwesi.98 * 92.5mm akụkụ emere nke A ọkwa Chinese kachasị 10 ika 18650 mkpụrụ ndụ batrị dị elu na ezigbo ikike.Protection board wuru n’ime ya, iribiga oke, oke ọkụ, oke ọkụ ma na -echekwa nchedo batrị na-eji nchekwa batrị na ogologo ndụ. Anyị bụ ndị ọkachamara emeputa maka lithium batrị na rechargeable ọtụtụ afọ experience.We anabata OEM / ODM iji si niile oversea mba. Biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị site na email: sales@polymer-batterys.com
China mepụta 7.4v 18650 2s1p batrị lithium ion batrị maka ihe GPS tracker, gps nwere mkpanaka
Anyị na-enye ezigbo mma ahaziri 18650-2s1p 7.4v 3500mAh Rechargeable Lithium ion Battery maka GPS tracker akpa, obere GPS.The batrị mkpọ nwere ike iji GPS tracker, Container tracker, Vehicle tracker, Automobile data recorder na ngwa ndị ọzọ kwesịrị ekwesị. 38 * 18 * Igwe 65mm nke Samsung 18650-35E 3500mah sel batrị dị elu nke nwere ezigbo ikike.BMS wuru n'ime ka ịchekwa batrị ogologo ndụ na nchekwa.We na-elekwasị anya na batrị OEM LiFePO4 na mkpọ batrị, na-enye azịza zuru oke maka nyocha batrị gị, gụnyere BMS & IC. Site na imewe batrị na nnyefe batrị. Site na batrị OEM gaa bụrụ nke OEM na ngwugwu OEM.
Igwe dị omimi dị elu 11.1v 5200mAh batrị maka igwefoto CCTV / njikọta splicer / wifi wireless / ìhè anyanwụ.
Anyị na-enye ezigbo okirikiri dị elu nke 11.1v 5200mAh batrị maka igwefoto CCTV / fusion splicer / wifi wireless / ìhè anyanwụ.Ọkụ batrị nwere ike iji ya na ọkụ, ọkụ n'okporo ámá n'okporo ámá na usoro nchekwa nchekwa anyanwụ na wdg. gị arịrịọ, biko chere free ka anyị mara gị zuru ezu na ngwa na-arịọ arịrịọ.